Izindaba - Ikhasimende elivela e-Australia, eSingapore, eThailand lafika efemini yethu lizophenya futhi livakashele izinsuku ezimbili.
Bagxile entanjeni yensimbi engagqwali ye-1x61mm, ∮42mm, Ngesikhathi sophenyo, amakhasimende avakashele indawo yokukhiqiza futhi abuka inqubo yokukhiqizwa kwesampula lentambo yensimbi engagqwali engu-1 × 61 mm, 42mm, bese kuba yinkomfa yezobuchwepheshe yocingo mayelana intambo yensimbi engagqwali ibibanjwe
Izivakashi zanelisekile ngobuchwepheshe kanye nemishini yefektri yethu, ziveza izinhloso zokuqonda kanye nokubambisana .Umkhathi wezingxenye ezimbili zokuxhumana kahle kakhulu, okwabekwa isisekelo sokubambisana kwesikhathi esizayo.
Kuyaqondakala ukuthi imboni yethu izothola ama-oda angaphezu kwe-1,000Ton we-1x61mm, ∮42mm intambo yensimbi engagqwali uma lokhu kubambisana kuphumelela.
Imikhiqizo eyinhloko yizintambo zekheshi, izintambo zezimayini, izindophi zomkhumbi, izintambo zikaphethiloli, izintambo zemishini ethekwini, njll. Ingaphinde ikhiqize izintambo ezahlukahlukene zesakhiwo sensimbi zensimbi ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ngokukhipha kwamathani ayi-15,000 ngonyaka, ikakhulukazi okukhiqiza izintambo zensimbi enobubanzi obungu-6.0mm-42.0mm. Le nkampani inamandla amakhulu ezobuchwepheshe: inkampani inabachwepheshe bezobuchwepheshe abavela ku-Tianjin Yisheng wasekuqaleni asebeneminyaka eminingi bekhiqiza intambo yensimbi yensimbi.
Yiziphi izindlela ezifanele zokusetshenziswa nokugcinwa kwentambo yocingo?
(1) Isivinini sentambo egijimayo kufanele sizinze ngesikhathi sokusebenza, futhi akufanele seqe umthwalo ukugwema ukushaqeka;
(2) Ukulondolozwa Intambo yensimbi yensimbi iye yagcotshwa ngamafutha anele uma kwenziwa, kepha ngemuva kokusebenza, igrisi izokwehla kancane kancane, futhi indawo yentambo yensimbi yensimbi izothatha uthuli, imfucumfucu nokunye ukungcola, okudala ucingo lwensimbi intambo nezithungu zokugqoka nokugqwala. Ngakho-ke, kufanele ihlanzwe futhi ifakwe uphethiloli njalo. Indlela elula ukusebenzisa ibhulashi le-wire namanye amathuluzi ahambisanayo ukusula uthuli nokunye ukungcola ebusweni bezintambo zocingo, futhi ngokulinganayo uthambise ugesi wentambo oshisayo nowancibilikayo entanjeni yocingo, noma ufafaze Amafutha enjini angama-30 noma angama-40 ebusweni bentambo yocingo, Kodwa ungafafazi kakhulu futhi ungcolise imvelo;
(3) Amarekhodi okuhlola Ukusetshenziswa kwezintambo zensimbi zensimbi kufanele kuhlolwe njalo futhi kuqoshwe. Ngaphezu kokuhlanza nokufaka uphethiloli oshiwo ngenhla, okuqukethwe ukuhlolwa okujwayelekile kufanele kubhekwe nokuthi kungakanani ukugqoka, izintambo eziphukile, ukugqwala nezingwegwe zokudoba, izindandatho, kanye nokuthambisa. Gqoka izingxenye ezisengozini efana nemisele yamasondo. Noma ikuphi ukungajwayelekile kufanele kulungiswe noma kushintshwe ngesikhathi.